MAXAA KU QASBAY ABDULLAHI XIIREY IN UU DURAN FARAH BEEN ABUUR KAGA SAMEEYO FACEBOOK MESSAGE ?"SOLA INVESTIGATES"
On 8/4/2016 (IST)
Ugu horeyn waxaa laga yaabaa in aqristayaasha shabakada SOLAPORTAL aan aqoon u lahayn labadan shaqsi ee la kala yiraahdo ABDULLAHI XIIREY iyo DURAN FARAH,waa laba qof oo SOMALIYA ku wada nool isla markaana ka shaqeeya dhanka cayaaraha iyo dhalinyarada,Mr Duran Farah waa xoghayaha Olimbikada Somaliya,iyadoo bahweynta isboortiga ay aad u yaqaanaan isla markaana xilal kala duwan ka soo kala qabtay GOS "Guddiga Olimbikada Somaliya",Mr Abdullahi Xiirey waa agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaarada dhalinyarada iyo isboortiga,waxaa is weydiin leh halkay iskala qaadeen maxaase isu keenay?
Sida wararka hoose aan ku maqlay xiligii aan waday baarista, waxaa Mr Duran Farah lagu eeday in gabar ay qaraabo yihiin uu la rabo jago sida la sheegay ah gudoomiyaha dhalinyarada qaranka isla markaana qaabka uu ula taliyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ay tahay mid NGO ah,eeda waxaa bartiisa FACEBOOK soo geliyay Mr ABDULLAHI XIIREY - eeg sawirka hoose:
Ka dib arintii waxaa dhexda kaga soo dhacay Mohamed Warsame Sandhool oo ka tirsan South Central Somali Youth Umbrella,isagoo faafiyay qoraalo la yiri waxaa si qaas oo hoose isu weydaarsaday Mr Duraan iyo Mr Xiirey,eeg sawirka hoose.
Shaqsigan faafiyay qoraalka la yiri waxaa si hoose ama message ugu wada hadlay Mr duran iyo Mr Xiirey waa Mohamed Warsame Sandhool , eeg sawirka hoose.
Iminka aan ku laabano wada hadalka la yiri wuxuu dhexmaray Mr Durah Farah iyo Mr Abdullahi Xiirey,eeg sawirrada hoose.
Mr Duran Farah sida aan ku aragno qoraalada sare ee la yiri si SIR ah ama MESSAGE ayuu ula hadlay shaqsiga bogiisa FACEBOOK soo geliyay,waxaa laga yaabaa dadka intooda badan in ay rumeystaan,iyagoo u arka in MESSAGE FACEBOOK aan been laga sheegin karin oo 100% xaqiiq ay tahay,waxaa arintaa ku sii adkeystay Mr Abdullahi Xiirey oo barta facebook uu ku leeyahay soo geliyay,eeg sawirka hoose.
Wixii shaqsiyadan aan kor ku soo xusnay dhexmaray iyaga ayay quseysaa,laakiin shabakada SOLAPORTAL mar walba waxay baaritaan dheer oo aan isticmaalno PROFESSIONAL JOURNALISM iyo TECHNOLOGY aan u soo bandhignaa aqristayaasha si ay u arkaan xaqiiqada oo ay la socdaan sawiro iyo waxyaabo kale,saa awgeed bal aan isla eegno siday wax u hiraan.
Ugu horeyn qoraalka FACEBOOK MESSAGEKA ah ee la yiri Mr Duran Farah ayaa qof kula sheekaystay waxba kama jiraan ee waa BEEN ABUUR
Laba jeer riix shabakadan la yiraahdo FACEBOOK CHAT GENERATOR oo aad ku sameyn kartid nooc walba oo wadahadal BEEN ABUUR ah.
Waxaa wada hadlaya iminka musharaxa madaxweynaha Mareykanka Mr Donald Trump iyo Mr Duran Farah oo ah Xoghayaha GOS,FACEBOOK MESSAGEKII ay ku sheekeysteen qaabkan ayuu ku bilowday.
Waqti ka yar 2 daqiiqo ayaan ku sameynay wada hadalka DONALND TRUMP iyo DURAN FARAH,inagoo isticmaalnay shabakada aad ku aragtaan sawirka hoose,
Laakiin shaqsigii ka sameeyay BEEN ABUURKA la yiri waxaa lagula sheekeystay Mr Duraan wuxuu ilooway,waqtiga oo kala duwan,telefoonka MESSAGEKA oo isla markaa lagu hadlayo si COD ah,bal eeg kan been abuurka ah ee aan sameynay - taariikhda waa 31.2.2016 iyo waqtiga TRUMP iyo DURAN ay wada hadleen oo an si keeni karin.
Tan kale qoraalada la yiri waa kuwa DURAN FARAH waa FAKE ay ku buuxaan WRONG SPELLING ama HINGAADYO QALDAN,taasoo xoghayaha GOS aan lagu aqoon,markaa shaqsigii is yiri BEEN ABUUR intaa la eg umadda ka dhaadhici runtii way ka halawday ee waxaa la qaatay in si kale oo aan la fahmi karin uu ula dagaalamo.
Waxyaabihii ugu foosha xumaa ee aan aragnay xiligii baarista waa sawirka hoose ee Mr Xiirey uu ku tusayo asxaabtiisa BEEN ABUURKA Duran Farah.
Ugu dambeyn baaritaankan waxay DIGNIIN u tahay shaqsiyada isku daya in ay isticmaalaan TECHNOLOGY si ay u sameeyaan BEEN ABUUR dhibaato u keeni karta qof walba oo dagaal ay kula jiraan,laakiin SOLAPORTAL marwalba waxay diyaar u tahay in ay soo bandhigto arimaha noocan ah,Mr Duran Farah waxaa la gudboon in maxkamada Somaliya uu la tiigsado si shaqsiga ku kacay arimahan sharciga loola tiigsado.